MANDA S.A: Manana ny lalàna mifehy azy ny jono ka tokony ialàna ny fitrandrahana tsy ara-dalàna | Journal Madagascar
“Tsy ny mpandraharaha samy mpandraharaha intsony no mifaninana fa ny mpisehatra tsy ara-dalàna no mifaninana aminay izay iangavianay ny ministera handray fepetra mifanaraka amin’izany”, hoy ny mpitantana ny orinasa Manda S.A, Raherimanana Bakoly. Nambarany fa “fotoana anarahana ny lalàna ny mifehy ny jono izao ary tokony ialàna ny fitrandrahana tsy ara-dalàna (exploitation sauvage). “Ohatra ny fitrandrahana ny drakaka, voaraka tsara ve hoe 11 sentimetatra ny drakaka faran’ny kely azo alaina?” Amin’ny maha mpandraharaha azy ao anatin’ny tontolo ny jono dia nilaza izy fa tokony miroso any amin’ny fiompiana mba hampaharitra ity sehatra ity.
Manomboka mahazo aina ireo orinasa misehatra amin’ny jono taorian’ny krizy ara-pahasalamana nateraky ny covid-19. “Mahazo aina tsara izahay izao taorianan’ny roa taona tsy niasana. Voakarakara foana ny usine ary mbola mipetraka amin’ny maha orinasa malagasy azy, manaraka ny fenitra eraopeanina afaka mifaninana amin’ny tsena anatiny sy ivelany”, hoy hatrany Raherimanana Bakoly. Marihina fa mandray anjara amin’ny foire des produits halieutiques eny amin’ny Lapan’ny kolontsaina sy ny fanatanjahantena Mahamasina ny orinasa Manda S.A. Hita eny an-toerana avokoa ireo sakafo vita avy amin’ny hazandranomasina nahafantarana azy hatramin’izay.